Tesla Semi ဤသည် Elon Musk ၏လျှပ်စစ်ထရပ်ကားဖြစ်သည် Gadget သတင်း
Tesla Semi, ဒီဟာ Elon Musk ၏လျှပ်စစ်ထရပ်ကားဖြစ်သည်
ဒီနေ့ရောက်လာပြီ Elon Musk သည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သူသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်ထရပ်ကားလုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်၍ သူ၏ရူပါရုံကိုပြသနိုင်ခဲ့သည်။ တစုံတယောက်သောသူအပေါ်သို့တက်လျှင်၊ သူ့မော်ဒယ်တော်တော်များများရှိတယ် Tesla Semi သည်လျှပ်စစ်ထရပ်ကားတစ်စင်းဖြစ်ပြီး ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင်စတင်ထုတ်လုပ်မည်.
တက်စလာ Semi အနာဂတ်အမြင်ရှိပါတယ်။ သို့သော်ဤအရာသည်အလွန်အရှိန်အဟုန်မြင့်မားစွာနှင့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရရှိလိမ့်မည်။ စတင်များအတွက် Elon Musk သည်သူ၏ထရပ်ကားများကိုသမားရိုးကျမော်ဒယ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့်ကအရှိန်မှကြွလာသောအခါ။ ပထမ ဦး ဆုံးကိန်းဂဏန်းများကိုသာအခန်းနှင့်သာပေးခဲ့သည်။ 0-100 km / h ရဲ့ရလဒ်လား။ ရုံအားကစားကားတစ်စီးလိုပဲ- ၅ စက္ကန့်အတွင်းအမြန်နှုန်းသို့ရောက်ရှိသည်။ ပုံမှန်ဒီဇယ်ထရပ်ကားသည် ၁၅ စက္ကန့်ခန့်ကြာသည်။
ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာအရာရာတိုင်းမရှိခဲ့ဘူး။ Tesla Semi သည်ပေါင် ၈၀၀၀၀ (၃၆ တန်ခန့်) လေးသည့်နောက်တွဲယာဉ်တစ်စီးနှင့်သွားပါကအရှိန်သည် ၀.၁၀၀ ကီလိုမီတာမှစက္ကန့် ၂၀ သာရှိမည်။ သမားရိုးကျမော်ဒယ်ဝေးနောက်ကျကျန်ရစ်။ ဤအတောအတွင်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကိုနောက်ဘက် ၀ င်ရိုးရှိလွတ်လပ်သောမော်တာ (၄) ခုမှပေးသည်။ ဤသည် Tesla Semi နိုင်ပါလိမ့်မယ် အကွာအဝေး၏မိုင် 500 ရောက်ရှိဖို့ တစ်ခုတည်းတာဝန်ခံအပေါ် (ကီလိုမီတာ 800) ။
အခြားတစ်ဖက်တွင်မူကျွန်ုပ်တို့သည်ဒီဇိုင်းသည်မည်သူ့ကိုမျှမချစ်သောသူမဖြစ်စေပါ။ ပြီးတော့ကားမောင်းသူရဲ့တက္ကစီကိုကြည့်လိုက်ရုံနဲ့ငါတို့ဟာထရပ်ကားကဏ္dimensionမှာရှုထောင့်အသစ်တစ်ခုကိုရင်ဆိုင်နေရတယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်လာတယ်။ တက်စလာလိုချင်ခဲ့သည် သင်၏တက္ကစီသည်သမားရိုးကျထရပ်ကားတက္ကစီထက်ရထားတက္ကစီနှင့်ပိုနီးသည်။ ဒါဘာကိုဆိုလိုတာပါလဲ? ကောင်းပြီ, ကားမောင်းသူအခန်း၏အလယ်၌အတူတူထိုင်ပါလိမ့်မည်။ သူ့ရှေ့တွင်ကြီးမားသော windshield နှင့် control panel တစ်ခုလုံးကိုလွှမ်းမိုးထားသည့်ကြီးမားသောဖန်သားပြင်နှစ်ခုကလွှမ်းမိုးထားသည်။ ထို့အပြင်ရုပ်ပုံများကိုသင်အနီးကပ်ကြည့်မည်ဆိုလျှင် Tesla Semi တွင်ကြေးမုံ၊ အဲဒီအစားအရာအားလုံးကိုမိုးလုံလေလုံဖန်သားပြင်ပေါ်မှာပြသနိုင်မယ့်ကင်မရာများရှိပါတယ်။
ဒါပေါ့, Autopilot ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရမောင်းနှင်မှုနှင့်လမ်းဘေးအကူအညီပေးရေးစနစ်ရှိလိမ့်မည် သင့်ရဲ့လက်ရှိမော်တော်ယာဉ်များအတွက်ရှိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးတွင် Tesla ကသုံးစွဲသူရှိလိမ့်မည်ဟုခန့်မှန်းသည် လောင်စာစုဆောင်းအတွက်ထက်ပို $ 200.000 နှစ်နှစ်ကာလ၌တည်၏။ ငါတို့ပြောခဲ့သလိုပဲတက်စလာ Semi ကို ၂၀၁၉ မှာထုတ်လုပ်တော့မယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ယေဘုယျ » NOTICIAS » Tesla Semi, ဒီဟာ Elon Musk ၏လျှပ်စစ်ထရပ်ကားဖြစ်သည်
Tesla Roadster ၏ဒုတိယမျိုးဆက်ဖြစ်သော ၂ မှစက္ကန့်အတွင်း ၀ မှ ၁၀၀ အထိရှိသည်
OnePlus 5T ကို Snapdragon 835 နှင့် ၆ လက်မ AMOLED မျက်နှာပြင်ဖြင့်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်